DAAWO: SENETARADA maanta carqaladeeyay Go’aan ka qaadashada shirkadda DP World | Wardoon Wardoon.net - Somali News
DAAWO: SENETARADA maanta carqaladeeyay Go’aan ka qaadashada shirkadda DP World
Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa maanta kulan ku yeeshay Xaruntooda ee Muqdisho,waxaana kulankooda ay uga doodayeen Xeerkii ay ansixiyeen Golaha Shacabka kaas oo dalka looga mamnuucayay shirkada DP World ee laga leeyahay Wadanka Imaaaradka Carabta.
Kulanka markii uu furmay ayaa waxaa xildhibaanada ay soo jeedinayeen qaarkood talooyin ku aadan in Goluhu asyan ansixin xeerkaas si waqti loosiiyo in ay uga soo talo bixiyaan,halka sidoo kale Golaha qaar ay sheegayaan in xeerkaan la meel marinayo.
Xildhibaanada ugu badan ee carqaladeeyay fadhiga go’aanka looga gaari lahaa shirkada DP World ayaa taabacsan Guddoomiye ku­xigeenka Kowaad Aqalka Sare ee Barlamaanka Federaalka Somalia Abshir Maxamed Axmed (Bukhaari) iyo Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo isnaa garab ahaan kasoo jeeda Imaaraadka Carabta.
Bukhaari iyo Cumar C/rashiid ayaa ololo ugu jira sida Golaha Aqalka Sare uu uga hor imaan lahaa Go’aanka uu baarlamaanka Somalia dalka uga eryay Shirkada DP World.
Xildhibaano ku dhow 20 oo isbaheystay ayaa is hortaag ku sameeyay go’aanka la filaayay in laga gaaro shirkada DP World, kuwaa oo u muuqda inay mashruuc la xirteen dowlada
Imaaraadka Carabrta. Sidoo kale, Xildhibaanada ayaa doonaaya inay wakhtiga u dheereeyaan shirkada, waxaana manta la filaayay in go’aanka kadib xeerkaas uu saxiixo Madaxweyne Farmaajo, kadibna lagu dhaqmo.